Written by မောင်ဒီ
ဘယ်သူ အချစ်ဆုံးလဲ ဆိုတာပါ။
Written by Naing Oo Nyo
ဒီလဆန်းက မမျှော်လင့်ဘဲနဲ့ ပါရီကို ဧည့်သည်တယောက် ရောက်လာတယ်၊ လန်ဒန်ရောက် မန္တလာသား တစ်ယောက်က တဆင့်
ဆက်စပ်ပြီးရောက်လာတာ။ ကိုယ်ကလည်း ဧည့်သည်လာတာ ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ လိုလိုလားလားပါပဲ။ ကိုယ်က အစစအရာရာ
ပြည့်ပြည့်စုံစုံဧည့်ဝတ်ကျေနိုင်သူ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်နေသလိုနေ စားသလိုစားနိုင်ရင် ၀ဲလ်ကမ်းပါပဲ။ အခုလဲ ဒီလိုပဲ ဒါလေးကို
အရင်ညှိရတယ်။ လာမှာကလဲ ခေတ်ပေါ်ကဗျာဆရာ ခင်အောင်အေး တဲ့။ လန်ဒန်မှာ ကဗျာလာရွတ်တာတဲ့။ မြို့တက်လာပြီး
ရွတ်တော့ တောလား(အောင်ချိမ့်) တဲ့။ ခုတော့ ဂျာမဏီကိုရောက်နေတယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ ဟိုချိတ်ဒီချိတ်နဲ့ ဖုံးနံပါတ်ရတော့ ချက်ခြင်း
ကောက်ဆက်၊ မေးလ် အကောင့်ချင်းဖလှယ်၊ ဂျီတော့မှာ စကားကြာကြာ ပြောရင်းနဲ့ လာမယ့်နေ့တွေ အချိန်တွေ ဘယ်လိုလာ
မယ် ဆိုတာတွေ ဖလှယ်ဖြစ်ကြတယ်။ ပြောလို့ဆိုလို့လဲ တော်တော်ကောင်းပါရဲ့။ ကိုယ်လို “ရေစင်” သမားမို့ အတွဲတော့ညီအုန်းမယ်
ဆိုပြီး တွေးပျော်ရသေးတယ်။ ကိုယ့် Type ကလဲ ရန်ကုန်စကားနဲ့ ပြောရရင်သရက်တောကျောင်း အောက်ထပ်နေ ဖိုးတူး၊ ၁၉ လမ်းနဲ့ မောင်ပိန် အလင်းရောင်တို့ ပတ်သွားနေတဲ့ အထာမျိုးမို့ ကဗျာဆရာ အကြိုက်တွေ့သွားမှာပါလို့ တွေးမိရဲ့။
Read more: ပါရီကဗျာခရီးသည် (ရေးသူ-နိုင်ဦးညို)
Written by အောင်ချိမ့်
ငါတို့ အာသာမပြေတဲ့ Lots of thirst
လိုနေတာအများကြီးနဲ့ we are never quenched
သစ်လွင်ပြီး မရှိတဲ့အရာ Fresh things non-existent
အခု ငါရေးနေတဲ့ကဗျာက ရှာနေတာပေါ့။ the poem I 'm now writing is searching for.
ရေးပြီး ပုံနှိပ်ပြီးတဲ့အခါ If, written and printed
မတွေ့ရင်..... it fails,
နောက်ထပ် ငါ့ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သင်ထပ်ဖတ်ချင် you will long to readanew poem of mine.
လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ။ I think.
အောင်ချိမ့် Aung Cheimt
သရုပ်ဖေါ် ပန်းချီ ၀င်းဖေ
မဏိပူရပြည်နယ် လေခွန်းတောင် တော်လှန်ရေးစခန်းရှိရာ တောင်ကုန်းလေးပေါ်က ညက နက်သထက်နက်လာပါတယ်။သွပ်မိုးပြီး ထရံ ကြဲကြဲကာထားတဲ့ မြေစိုက်တဲ ကြီး ၂လုံး ထဲမှာတော့မြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကို ကို ကယ်တင်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အသီသီးနဲ့ နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီး စွန့်လွတ်စွန့်စားရောက်လာကြတဲ့ တော်လှန်ရေး ရဲဘော်တချိူ့ဟာ ကောက်ရိုးမွေ့ယာ ရှည်ကြီးတွေပေါ်မှာ အချင်းချင်း ပူးကပ်ပြီးအိန္ဒိယ ဘာဘူစောင်ကြီးတွေထဲမှာ ကွေးလို့ ကသည်းဆောင်းကိုအံတု နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်း မန်းလေးသားဆရာဝန် တော်လှန်ရေးသမားကဗျာဆရာ လူဝကြီးက ကောက်၇ိုးမွေ့ယာ အနွေးဓါတ်ပို ၊တစ်ယောက်တစ်မျိူးဟစ်ကာတေးမပြတ်ဆို လို့နဘေထပ်စပ်ခဲ့တာပေါ့။ ခုတော့ကောက်ရိုးမွေ့ယာကြီးပေါ်ကဂီတ သီချင်းတွေလည်းမောမောနဲ့အိပ်မောကျနေပေါ့။သူတို့တွေ ရဲ့ခြေရင်းမှာ သစ်သား သေနတ်တွေ ဟာလည်း တနေကုန် သူတို့နဲ့ ဘယ်ညာ နင်းပြေးလွား လေ့ကျင့် ချိန်တလျောက်လုံး သေနတ်တစ်လက်ယောင်ဆောင်ကာ လိုက်ပါ အမှုထမ်းခဲ့ရပြီး ညနေချမ်း ဂီတဆည်းဆာချိန်မှာ သူတို့ စိတ်ထွက်ပေါက်ပေး သံစဉ်မျိူးစုံ ဟစ်အော် သီဆိုကြချိန်မှာ ဂစ်တာ တစ်လက်ယောင်ဆောင်ကာ အမှုတော် ကိုထမ်းပေးခဲ့ရတာမို့ ခုမှပဲ သူတို့လည်းအနားရပြီး အေးဆေး လှဲလျောင်းမှေးစက်ရပါတယ်။
မဏိပူရဆောင်းညနှင်းစက်များက သိပ်သထက်သိပ်သည်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်က ထိုင်နေတဲ့ ကင်းတဲလေးပေါ်မှာ ညဦးပိုင်းက တော့ အခြားရဲဘော်တွေပါ လာပြီးသီချင်းတွေဆိုကြ ကိုယ့်ရပ်ရွာအကြောင်းပြောကြနဲ့ညနက်ချိန်မှာတော့ အဲဒီည ကင်းကျတဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူဝကြီးပဲ ကျန်ပါတော့တယ်။လူဝကြီးက မန္တလေးကပါ။တိတိကျကျပြောရရင် ကဗျာရေးကောင်းတဲ့ ဆရာဝန်ပါ။မန္တလေးရဲ့နာမည်ကြီး ဂဠုန်နီ စစ်ကြောင်းကပါ။ရှစ်လေးလုံးအပြီးမန္တလေးကနာမည်ကြီးပန်းချီဆရာ ကိုစစ်ငြိမ်းအေး၊ ဆရာထူး(ခ) ဦးရွှေထူးတို့နဲ့အတူ မန်းလေးကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူ လွတ်မြောက်ရေးနယ်မြေက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးစမယ့် အိပ်မက်နဲ့ ထွက်လာပြီး ဒီစခန်းကိုကျွန်တော်တို့ အရင်ရောက်နေနှင့်နေသူပါ။
ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ လေခွန်းတောင်စခန်းလေး ကိုရောက်ဘို့ အိန္ဒိယ နယ်ခြားက မိုးရေး မြို့လေးကနေ ဘစ်စကား ၂နာရီခွဲ လောက်စီးပြီး မဏိပူရနယ်ခြားတောင်တန်းတွေကိုကျော်လိုက်ရင် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မှာဂျပန်တွေအကြီးအကျယ်ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ အင်ဖါလွင်ပြင်ကိုရောက်ပါတယ်။အနောက်ဖက်ဒေသက တော်လှန်ရေးရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ ရန်ကုန် မန္တလေး မုံရွာ၊ရွှေဘို၊ စစ်ကိုင်း၊ ကလေးဝ၊ ကလေးဒေသ က သပိတ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဟာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးရဲ့ အေးစက်တဲ့ ကြိုဆိုမှုနဲ့ ကြုံခဲ့ရပြီး အင်ဖါလွင်ပြင်က အမှတ်ရှစ်ရိုင်ဖယ် တပ်ရင်းထဲကတောင်ကုန်းလေးထိပ်မှာ အကျယ်ချူပ်ကျနေသလို မသွားရမလာရ ရေဒီယိုလေးအစုတ်လေးနဲ့ပြည်တွင်းက ရဲဘော်တွေရဲ့ မုန်တိုင်းသတင်းတွေကိုနားစွင့်ရင်း၊ မသေထမင်းနဲ့ အသက်ဆက်။အနာဂတ်ဟာတစထက်တစမှုန်ဝါးလာတဲ့အခါ အချင်းချင်းတွန်းမိကြ တိုက်မိကြ။ကသည်းစစ်သားတွေ၊ရဲတွေရဲ့ ရိုင်းပြတဲ့ဆက်ဆံမှု။ ရိတ္ခာဂိုဒေါင်ကိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိူလ်တွေသာ တနေ့တခြားရွှေတွဲလွဲငွေတွဲလွဲ ဖြစ်လာ။ကျွန်တော်တို့ ရိက္ခာတွေက တနေ့တခြားလျော့လာ။ဒီလိုနဲ့ မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးထက် ရိတ္ခာ ဆေးဝါး စောင်ခြင်ထောင် ရရှိရေးကို အရင်တိုက်ပွဲဝင်ရမလိုဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ ကသည်းရဲတွေစစ်သား တွေက အပြင်ထွက်လည်တဲ့ရဲဘော်တချိူ့ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ရိုက်နှက်စော်ကားလာတာမို့ အားလုံး စခန်းအပြင်ထွက်လမ်းလျောက် ချီတက်ကြဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရလဒ်ကတော့ အင်အားသုံးဖြိုခွဲ ခံရတဲ့အပြင် ရန်ကုန်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေအပါဝင်ရဲဘော်(၈၀)ကျော်ကိုနယ်စပ်ထိ ကားနဲ့တင်ခေါ်ပြီး နှင်ထုတ်ကြတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပြသနာအပြီးနောက်ထပ် ရောက်လာတဲ့ရဲဘော်တွေနဲ့ အင်အားကိုရှိသလောက်ပြန်စုစည်းပြီး စစ်ပညာသင်တန်းတော့ ဖြစ်သလိုယူထားကြဘို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ။အထက်ကဖေါ်ပြခဲ့သလို သေနတ်ပင်တွေနဲ့ တနေကုန် ဘယ်ညာဘယ်ညာ ပြေးလွားဟစ်ကြွေးလေ့ကျင့်ကြ။ညမှာလည်း ကင်းတာဝန် ချပြီးစောင့်ကြရပါတယ်။ အဲဒီညမှာတော့ ကျွန်တော်နဲ့လူဝကြီးကင်းတွဲကျတာမို့ အမှောင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်း အတွေးနယ်ချဲ့နေမိပါတယ်။
ကိုဦး လို့လူအများခေါ်ကြတဲ့ ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦး ကိုကျွန်တော်က ကာရံနဘေတွေ နဲ့သေသေသပ်သပ် ထပ်ထားတဲ့တော်လှန်ရေးကဗျာတွေရေးတဲ့ကဗျာဆရာ မြတ်ထက် အဖြစ်ပိုပြီး အသိအမှတ်ပြုခဲ့မိပါတယ်။သူကတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် စစ်ဂျာကင်ကြီးဖိုး၇ိုးဖါးယား ပုဆိုးညစ်ထေးထေးကြီးကိုခြုံပြီး ဘုရားစူးဆရာဝန်ပါလို့ ကျိန်ပြောရမဲ့ဆရာဝန်အစားထဲကပါ။နောင်အခါမှာတော့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံရောက် ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့ကျော်ကြားလှတဲ့ တိုက်ပွဲဝင်သင်္ကြန်သံချပ်တွေ ကိုနှစ်စဉ် ပြောင်ပြောင်မြောက်မြောက်ရေးဖွဲ့ခဲ့သူလည်းဖြစ်လာပါတယ်။(၂၀၁၀ နဲက၂၀၁၁ မှာတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့် သံချပ်ရေးတာနားခဲ့ရပါတယ်) ။အဲဒီညကတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် သူနဲ့ကင်းကျတာမို့ ကျွန်တော်ဘေးမှာပက်လက်ကြီးလှဲပြီးသူလည်းကျွန်တော်လိုပဲမရေရာလှတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့ရှေ့ရေးကိုအတွေးနယ်ချဲ့နေပုံရပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်မန်းလေးမှာကျန်ခဲ့တဲ့မိဘတွေသတိရနေသလား။မသိပါဘူး။ညဦးပိုင်း ကျွန်တော်တို့ကင်းတဲမှာ အင်းစိန်ကျောင်သားသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ ကိုစစ်နိုင်ဦး(ကျဆုံး)ကျောက်မဲ ကိုကျော်ကြီး ကိုညို၊ရဲဘော်သံခဲတို့ကိုဇော်မိုးထွန်းတို့က ထုံးစံအတိုင်းကမ္ဘာမကြေဘူး၊သွေးမုန်တိုင်း၊အရေးကြီးပြီညီနောင်အပေါင်းတို့စသည်ဖြင့် ဟစ်အော်ပေါက်ကွဲခဲ့ကြ။ခုတော့သူတို့အားလုံးဟာ အဆောင်ထဲမှာစုပြုံတိုးခွေ့ပြီးအိပ်မောကျနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့ တမ္ဘာလုံးမှာကျွန်တော်တယောက်ထည်းရှိနေတော့သလို တ်ိတ်ဆိတ်လို့ ၊ ဘယ်ရန်သူကမှာချဉ်းကပ်လာမှာမဟုတ်တဲ့ အမှောင်ထဲကိုအဓိပါယ်မဲ့ငေးစိုက်ကြည့်နေမိပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာ ပက်လက်ကြီးလှဲပြီးတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ကဗျာဆရာလူဝကြီးဆီက မမျော်လင့်ဘဲလေးလေးတွဲ့တွဲ့နဲ့ကဗျာစာသားလေးတခုကိုခပ်တိုးတိုးလေးညဉ်းတွားရွတ်ဆိုသံလေးထွက်လာပါတယ်။
ကဗျာစာသားတွေက ကျွန်တာ့်စိတ်အစဉ်ကို ငယ်စဉ်ကနေခဲ့ဘူးတဲ့ ဇာတိရွာလေးနဲ့ ရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ ရွာလေးတွေ
ဆီကို ခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ လရောင်ဖြာဆင်းနေတဲ့ ရွာလမ်းဖုံဖုံ လေး၊အုန်းလက်လေးတွေက လေမှာတအိအိရမ်းခိုက်။ လရောင်နဲ့တလက်လက်တောက်လို့။ ခြံဝိုင်းလေးထဲက သက်ကယ်မိုး ၀ါးထရံကာ အိမ်ဝင်းလေးကိုမြင်ယောင်မိသလို အိမ်လေးရဲ့ အိပ်ခန်းလေးထဲမှာ ရွာသူအပျိူလေးတစ်ယောက် ပုရစ်သံလေးတွေ နားစွင့်ရင်း အတွေးနယ်ချဲ့နေပုံလေးကိုပါ မြင်ယောင်နေမိပါတယ်။ကဗျာကပေးထားတဲ့ အတွေးရွာလေးမှာကျွန်တော်ဟာတိတ်ဆိတ်နေမိတုန်း။
ရုတ်ကနဲ ငြိမ်သက်နေတဲ့ညလေးဟာ ထိုးဟောင်လိုက်တဲ့ ခွေးဟောင်သံကြောင့်လှုပ်ခါလာပါတော့တယ်။အိပ်ယာလေးထဲမှာ အတွေးနယ်ချဲ့နေတဲ့လုံမပျိူလေးဟာ ဆတ်ကနဲ့ ချက်ချင်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ထထိုင် လိုက်ပြီးတော့ ကပြာကယာ ထရံပေါက်ကနေ အပြင်ရွာလမ်းဘက်ကို ချောင်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ မျော်လင့်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။သူ့ချစ်သူလုလင်ပျိူလေးဟာလူယုံတော်သာဂိကိုအဖေါ်ခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတာမို့ဝမ်းသာမှုနဲ့အတူတဒိတ်ဒိတ်ရင်ခုန်လှုပ်ရှားလာပါတယ်။ကဗျာထဲကလုံမငယ်လေးနဲ့အတူမှောင်ထဲမှာကင်းထိုင်စောင့်နေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်အစဉ်ကလည်းဇာတ်လမ်းလေးထဲကိုနစ်နေပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးဘာဖြစ်သလဲသိချင်စိတ်ငွေ့ငွေ့လေးက ကျွန်တော့်ကိုလွမ်းခြုံလာပါတယ်။လူဝကြီးဆီက ဘာသံမှ မကြားပဲတိတ်နေတာမို့ မေးမယ်လို့စိတ်ကူးခိုက်၊ ကဗျာရွတ်သံလေးက ဖြည်းဖြည်းလေး တိုးတိုးလေး ဆက်ထွက်လာပါတယ်။
ဒီအပုဒ်အရောက်မှာတော့ ကဗျာက ဇာတ်ရှိန်ကိုမြင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။လရောင်အောက်က ချစ်ငွေ့တွေ လျှံထွက်နေတဲ့ ၀ါးပုလွှေသံလေးကိုကြားယောင်မိလာသလို ထရံကြားကနေ ပုလွှေသံရှိရာဆီ ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့ ချောင်းကြည့်နေရှာတဲ့ လုံမငယ်လေးရဲ့ ပုံရိပ်ကိုပါမြင်ယောင်လာစေပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာ တောတွင်းဖြတ်သန်းမှု လေးနှစ်ကာလပြီးတဲ့ နောက်မှာ ခေတ်ပေါ်အနုပညာစီးကြောင်းမှာ မျောပါစီးဆင်းရင်း မောင်ချောနွယ်၊အောင်ချိမ့်၊ သုခမိန်လှိုင်၊သစ္စာနီ ၊နေမျိူး ကနေ ဒီနေ့ ဇေယျာလင်း၊ဟိန်းမြတ်ဇော် စိုင်းဝင်းမြင့် ခရမ်းပြာထက်လူ၊ မိုးဝေး၊မိုဃ်းဇော် ၊စေတ၊ မောင်တင်သစ်၊မောင်နီဦး၊မောင်သိန်းဇော်၊၀င်းမြင့်၊မောင်ယုပိုင်၊ငုအိမ်ထက်မြက်၊ ခင်အောင်အေး၊စန်းဦး၊ မနော်ဟရီ၊မြတ်၊ပန်ဒိုရာ တို့ကဗျာတွေ နဲ့ထိတွေ့ကျွမ်းးဝင်လို့ ကာလများစွာသူတို့စကားလုံး တွေနဲ့ အသက်ရှူ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့တာ ဒီနေ့ထိပါ။သို့ပေမဲ့ ခေတ်ပြိုင်ကဗျာတွေကြား ဘယ်လိုပဲပျော်မွေ့နေနေ အကြောင်းတိုက်ဆိုင် လို့ ဒီကဗျာလေးကိုသတိရမိတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဒီကဗျာလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်ဟာလျော့မသွားတဲ့အပြင် တိုးသထက် သာတိုးပြီးမြတ်နိုး မိခဲ့ရပါတယ်။ ထို့အပြင် ‘မောင့်ပုလွှေသံ ချစ်ငွေ့လျှံ ’ ဆိုတဲ့ အပုဒ်က သုံးထားတဲ့စကားလုံး တိုင်းကို ခွဲစိတ်ဖြာကြည့်ပါတယ်။တခြားစကားလုံးတခုခု နဲ့လည်း မိမိဖါသာ အစားထိုးကြည့်မိဖူးပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ စကားလုံးတလုံးကိုမှ၊ ဖြုတ်လို့ပြင်လို့ တိုးလို့မရအောင် လှပသေသပ်လှတာမို့ အော် ‘ကဗျာဆိုတာ ဘာသာစကား ရဲ့ အညွန့်အဖူး’ဆိုတာ ဒါကိုပြောတာပဲလို့ ကြိမ်ဖန်များစွာသဘောကျမိခဲ့ဘူးပါတယ်။ညက ပြန်လည်တိတ်ဆိတ် နေသလို ကျွန်တော်ဟာ ချစ်ဇာတ်လမ်း ကဗျာလေးထဲက ဘာဆက်ထွက်လာမလဲ ဆိုတာကို အာရုံကို နိုးပြီး နားစွင့်နေခဲ့မိပါတယ်။
အဖေရိပ်မိ အမေသိ ဆူခံထိမှာကြောက်လှသတော့။
ဒီနေရာမှာတော့ လုံမငယ်လေးရဲ့ တိုးလျလျရင်ထဲက တောင်းပန်သံလေးဟာ ကဗျာဖတ်သူရဲ့ ရင်ထဲမှာ ကရုဏာလှိုင်းတွေ တဖျတ်ဖျတ်လှုပ်ခတ်သွားစေပါတယ်။တကယ်ပြန်စေလိုလို့ မဟုတ်ပဲ မနက်ကောက်စိုက်ဘို့ စောစောထရမဲ့ ကလေးမလေးရဲ့ ပူပန်မှုလေးနဲ့အတူသုံးထားတဲ့ အဖေရိပ်မိ အမေသိ ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ မြန်မာမိသားစုလေးတွေထဲက အဖေနဲ့ အမေတို့ကြား သမီးဖြစ်သူတွေရဲ့ အရေးအရာမှာ ပါဝင်ထိစပ်တတ်တဲ့ပမာဏ နဲ့သဘာဝလေးကိုပါ လှစ်ကနဲ အချစ်ဇာတ်လမ်းထဲ၊ ထည့်ပြမိအောင်ပြသွားတာလေးကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ ညနက်ထဲမှာ ကဗျာထဲက ကလေးမလေးရဲ့ အမောကိုကူသောက်ရင်း လင့်စင်ပေါ်မှာမုဆိုး သားကောင်စောင့်သလို ကျွန်တော်ဟာ လူဝကြီးရဲ့ အသံတိုးထွက်လာမှာကို တထိတ်ထ်ိတ်စောင့်နေမိပါတယ်။တော်တော်နဲ့ ထွက်မလာပဲ တိတ်ဆိတ်နေရာကနေတာမို့ တော်တော်မချင့်မရဲဖြစ်နေမိရာက.......။
အော် ...ပုလွှေသံလေး ဝေ့ဝေေ၀ဝေး ဆိုပြီး ၀လေးလုံးကိုထပ်ပြီးမှ သုံးမှသုံးတတ်လေတယ်လို့တွေးနေဆဲမှာပဲကဗျာလေးဟာ ကျွန်တော်ဆီကနေ အမှောင်ထဲကို တရွှေ့ရွှေ့ တိုးဝင်ပြီးထွက်ခွါသွားပါတော့တယ်။ ကျွန်တော်က ဖြတ်ကနဲ ထပြီးအမိအရ ပြောလိုက်မိတာကတော့ ကောင်းလိုက်ထာဗျာ။ ဒုတိယစကားက အဲဒါဘယ်သူ့ ကဗျာလည်းဗျ။ အဖြေကတော်တော်နဲ့ ထွက်မလာပါဘူး၊တော်တော်ကြီးကြာတော့မှ မြတ်ထက် လို့ ခပ်ခပ်တိုးတိုးဖြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ လူဝကြီးကို တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ လူတယောက်ကို ကြည့်သလိုပြူးပြူးပျာပျာ ကြည့်ရင်းကအလောတကြီးမေးမိပါတယ်။ ခင်ဗျား ဒီကဗျာ အခုရေးလိုက်တာလား လို့မေးမိပါတယ်။ သူကအဝေးကြီးကို ငေးကြည့်နေပြီးမှ ကြာတော့ကြာပါပြီ အရေးတော်ပုံ မဖြစ်ခင်က စပယ်ဖြူ မဂ္ဂဇင်းမှာ ဖေါ်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ ကဗျာလေးပါလို့ဖြေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကချက်ချင်းပဲ ကျွန်တော့်ကို နောက်တခေါက် ပြန်ရွတ်ပြစမ်းပါဗျာ ပြီးတော့ စာရွက်ပေါ်မှာ ချရေးပေးစမ်းပါ ကျက်ထားချင်လို့ ပူဆာတော့ ဖြည့်ဆည်းပေးပါတယ်။ အဲဒီကဗျာစာရွက်လေးရ ကတည်းက ချစ်လွန်းလို့ ကြိမ်ဖန်များစွာ ကျက်ထားခဲ့မိတာမို့ အခုအခါ စာရှုသူကို ပြန်ပြီးချရေးပြနိုင်ခဲ့တာပါ။
ခုဆိုရင်ကဗျာဆရာမြတ်ထက် ခေါ် ကိုဦး နဲ့ရော ကဗျာလေးကိုနားထောင်ခဲ့ရတဲ့ လေခွန်းတောင် စခန်းကိုစွန့်ခွါခဲ့တာ ခုဆိုနှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ တော်လှန်ရေး ခရီးကြမ်း ထဲမှာ စုတ်ပြတ်သတ်သွားအောင် ရိုက်ချက်ပြင်းလှတဲ့ လောကဓာန်တွေ အကြိမ်များစွာကြုံတွေ့ရသလို တွေ့ရတဲ့ ရေကြမ်းလေကြမ်းတိုင်းမှာ အနုပညာကိုကျောပိုးပြီး တထောင်ဝင်တစ်ထောင်ထွက်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့လမ်းမှာ ကြုံရင်ကြုံ သလို ဘ၀တူရဲဘော်တွေကို ဒီ ကိုဦးရဲ့ ‘အုံ့ပုန်းချစ်’’ကဗျာလေးကို ရွတ်ဆိုဝေငှခဲ့မိပါတယ်။ထို့အတူ အနုပညာခရီး မှာ ကဗျာဆရာပေါင်းများစွာနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးရင်း ကဗျာရွတ်ပွဲများစွာကိုလည်း တက်ရောက်ခံစားမိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဒီလိုကြုံတိုင်းလည်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ မိမိတဦးသာပရိတ်သတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီကဗျာရွတ်ပွဲညလေးကို ပြန်ပြန်သတိရမိပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လောက်ကစလို့ သင်္ကြန်ချိန်ခါရောက်တိုင်း ပြည်ပရေဒီယိုတွေက တဆင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ရဲဘော်တွေရဲ့ တိုင်ပွဲဝင်သံချပ်တွေမှာ ပြေင်မြောက်လှတဲ့ ကဗျာဆရာမြတ်ထက်ရဲ့ သံချပ်စာသားတွေကြားရတိုင်းလည်း ဒီကဗျာလေးကို ပြေးသတိရမိသွားတတ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်လောက် ကစလို့ သင်္ကြန်မှာ ဆရာမြတ်ထက်ရဲ့ ကျန်းမာရေးကြောင့် သံချပ်စီစဉ်သူကိုကျော်ကြီး တခြားကဗျာဆရာ စာရေးဆရာတွေထံက သံချပ်တွေတောင်းပြီး တိုက်ပွဲဝင် သံချပ်တွေကိုအစဉ်အလာမပျက်အောင် တင်ဆက်လာပေမဲ့ ကဗျာဆရာမြတ်ထက်(ကိုဦး)ရဲ့ စကားလုံးတွေကို မကြားရတော့ပါဘူး။ နှစ်စဉ်မပျက် ရေးသားတင်ဆက်လာခဲ့တဲ့ သံချပ်ဆရာတစ်ယောက် သင်္ကြန်ရောက်ချိန်နီးတိုင်း ကျန်းမာရေးကြောင့်သံချပ်မရေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ဘယ်လောက် စိတ်ပျက်မိနေမလဲလို့ စဉ်းစားနေမိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကတော့ ဒီလောက်ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို မြန်မာကဗျာဖတ်ပရိတ်သတ်အတွက် ရေးထားခဲ့နိုင်တာတခုနဲ့တင် ဒီကမ္ဘာမြေပေါ် ကဗျာဆရာ မြတ်ထက် နှလုံးသားနဲ့ အလုပ်အကျွေးပြုခဲ့တာပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အရတော်လှတယ်လို့လည်း တွေးမိခဲ့ပါတယ်။ကိုဦး နေမကောင်းဘူးလို့ ရဲဘော်ဟောင်းတွေဆီက သိရကတည်းက ဖုန်းဆက်ကြ ဆုတောင်းကြနဲ့ အွန်လိုင်းမှာတွေ့နေပေမဲ့ ကိစ္စများမြောင်လူတို့ဘောင်ကြားနစ်နေပြီး ဟဲလိုနေကောင်းလားရယ်လို့ သတင်းမေး စကားဆိုဘို့အရေးကိုတောင် ဟိုလှည့်ဒီလှည့်နဲ့ပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစာစုလေးဟာ ကျွန်တော်ဘ၀မှာ ထူးထူးခြာခြား ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကို ထူးထူးခြာခြားလေးခံစားနိုင်အောင် ရွတ်ဆိုပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာတစ်ယောက် ရဲ့ကျေးဇူးကို အထူးအောက်မေ့သတိရချက်ပါ။ လောလောဆယ် လန်ဒန်မှာ ကဗျာရွတ်ပွဲလုပ်ကြမယ့် အစီအစဉ်လေး တစ်ခုက မထင်မှတ်ပဲပါဝင်စီးမျောဘို့ ဖြစ်လာရာက ဘ၀မှာထူးခြားလှတဲ့ ကဗျာရွတ်ပွဲလေးကို ပိုလွမ်းဆွတ်မိတာမို့ ဒီခံစားမှုလေးကို ဝေငှလိုက်ပါတယ်။ကဗျာလေးကို အစအဆုံး တစ်ပေါင်းတည်းပြန်ဖတ်ဘို့ ပြန်ရေးထားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကဗျာလေးကို ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ ကဗျာဆရာမြတ်ထက်တစ်ယောက် ကျန်းကျန်းမာမာပျော်ပျော်ရွင်ရွင်နဲ့ခုလိုချစ်စရာ ကောင်းလှတဲ့ကဗျာလေးတွေ ထပ်ရေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးစေချင်လို့ ဒီစာစုလေးကိုချရေးဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါကြောင်း.........။
ပုရစ်မြည်သံ စီစီညံ ပြန်ပါတော့နော် ပျိူ့မောင်တော်
မိုးယံလဲ့ရှင်း ပူငွေ့ကင်း မနက်ကောက်စိုက် ပျိူမေငိုက်
လမင်းကသာ ညခင်းဖျာ ဟားတိုက်လှောင်နေ ကောင်မတွေ
ကညှာခင်လေး မအိပ်သေးရှင့် ။ အဖေရိပ်မိ အမေသိ ဆူခံထိမှာကြောက်လှသတော့..။
ခွေးဟောင်သံကြား စည်းရိုးနား ပုလွှေသံလေး ဝေ့ဝေေ၀ဝေး
မောင်လားမသိ ချောင်းကာကြည့် လွမ်းတေးကုန်ဆုံး ညှိုးခွေနှုန်း
သာဂိအဖေါ် လူယုံတော် အုံ့ပုန်းအချစ် မေတ္တာစစ်
တွဲခေါ်ရောက်လာ ပျိူဝမ်းသာသရှင့်။ စိတ်ညစ်တ၀က်ပျော်တ၀က် အိပ်ပျက်ညတွေများပြီတော်ရေ...။
နားမှာကလိ ယားပါဘိတော့ ။
အုံ့ပုန်းချစ် ကဗျာဆရာ မြတ်ထက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ကျန်းမာရွင်လန်းပါစေ........
Written by ဗညားစစ်မင်း
သရုပ်ဖေါ် ပန်းချီ စံမင်း
၂၈.၅.၁၁ မနက် ကဗျာ"မန်ယူ" နှင့် "ဘာစီလိုနာ" ရဲ့ ချန်ပီယံလိ(ခ်) ဗိုလ်လုပွဲ ညနေ ၇း၂၃၊ Wembley အားကစားရုံကြီး မှာကစားကြမှာဖြစ်လို့ လန်ဒန် တမြို့လုံး ကြွတက်နေ သလို ခံစားရတယ်။ "မန်ယူ"ဝတ်စုံ တကားကားနဲ့
ဟန်ရေးပြနေကြတဲ့ အင်္ဂလိပ် အများအပြားကို လမ်းမထက် မှာတွေ့ရသလို၊"ဘာစီလိုနာ" ဝတ်စုံဝတ် စပိန်တွေ ကိုလည်း
ဟိုနားဒီနား မြင်ရပါတယ်။ တကယ်တော့Wembley မှာ Stadium နှင့် Arena ဆိုပြီး၂ ပိုင်းရှိပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲများ နှင့် အဆိုတော်များရဲ့ Concert တွေကိုတော့လူ ၉၀၀၀၀ ဆန့်Stadium ထဲမှာပြုလုပ်လေ့ရှိပြီး၊ TV အစီအစဉ် တွေဖြစ်တယ့်
"Strictly Come Dancing"၊ "Britain's Got Talent" တို့ကိုတော့ လူ ၁၂၅၀၀ ဆန့် Arena မှာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
Wembley Stadium မှာပွဲရှိပြီ ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအငှါးယာဉ် မောင်းသမားတွေက ပွဲမစမီ တစ်နာရီ နှစ်နာရီ အလို
်ကတည်းက အားကစားရုံ နားက A406 North Circular လမ်းမကြီးကို မသွားကြတော့ ပါဘူး။ နို့မို့ဆိုရင်တော့ ကားပင်လယ်
ထဲမှာ တကယ်ကိုငုတ်တုပ် မေ့တာပါပဲ။
နေလည်၂ နာရီ လောက်မှာအလုပ်ကဖုန်းဆက်ပြီး The Bread Factory ကပေါင်မုန့်တွေယူပြီး
Wembley အားကစားရုံ ထဲကို အခု ချက်ချင်း အမြန်သွား ပို့ရမယ့် အလုပ်ရှိကြောင်းနှင့်လက်ခံပေးဖို့ ပြောပါတယ်။
The Bread Factory ဆိုတာ ယူကေ က နာမည်ကြီး အချက်အပြုတ်သမားGordon Ramsay ရဲ့စားသောက်ဆိုင်တွေ
HiltonsHotels လိုလူချမ်းသာ အသိုင်းအဝန်းတွေသာ လာစားသောက်နိုင်တဲ့ နေရာတွေအတွက် ပေါင်မုန့်မျိုးစုံ နေ့စဉ်ပို့ 
ပေးနေတဲ့မုန့်ဖုတ် စက်ရုံပါ။ Wembleyအားကစားရုံ အထဲကို မရောက်ဘူးတာရယ်၊ ဒီနေ့ပွဲ အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲ
ဆိုတာ မြင်ဘူးချင်တာကြောင့်၊ ကျွန်တော်အဲဒီ အလုပ်ကို လက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဘီးငါးလုံးစာမျှလိမ့်ရုံ ရှိသေး ဖုန်းဝင်လာပါတယ်။
သူ့နာမည်က "Steve"တဲ့၊ Wembleyအားကစားရုံ ချက်ပြုတ်ခန်းManager ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့်တွေ ယူပြီး
သွားရင် အားကစားရုံ နားမှာရှိတဲ့Careys Car Park (အထဲ ပစ္စည်းပို့မယ့်ကားနဲ့လူကို သူတို့ ကွန်ပြူတာ စံနစ်ထဲမှာရထားတဲ့
လူနာမည်နှင့်ကားနံပတ် ဟုတ်မဟုတ်စစ်ပြီး၊ ၀င်ခွင့် ထုတ်ပေးမဲ့နေရာ) ကိုလာဖို့ ပြောပါတယ်။ ဒီပေါင်မုန့်တွေဟာ
ဘောလုံးသမားတွေအတွက်ဖြစ်လို့အသေအချာ ဂရုစိုက်ဖို့လည်း ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော် The Bread Factory ကို
ရောက်တော့ ပေါင်မုန့်အလုံး၁၀၀ကိုဗန်း ၅ ခု ထဲမှာအသေ အချာထည့်ထား တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း
ဘောလုံးသမားတွေ စားမယ့်တတောင် လောက်ရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကို ကြည့်ပြီးတာ့Super Market တွေက ပေါင်မုန့်တွေ
လိုပါပဲလို့ တွေးလိုက်ပါသေးတယ်။ ခဏနေတော့ Steve ဖုန်းထပ်ဆက်ပြီး A406 North လမ်းမကြီးက မလာဖို့ ပြောပါတယ်။
သူ့လေသံ အရ ဒီပေါင်မုန့်တွေဟာ သူ့အတွက် အရမ်းကိုအရေးကြီးနေတဲ့ပုံပဲ။ ကျွန်တော်က ဒီနားမှာနေတဲ့သူဖြစ်လို့ လမ်းတိုလေးတွေ ကနေ နာရီဝက်အတွင်းရောက်လာမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ Careys Car Park ရောက်တော့ ကားနဲ့
လူကို တိုက်ကြည့်ပြီး၊ ၀င်ခွင့်ထုတ်ပေးပါတယ်။ နောက်သူတို့ကပဲ Steveဆီကိုဆက်ပြီး ပေါင်မုန့်တွေ မကြာခင်ရောက်လာ
တော့မည့်အကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဘက်လှဲ့ပြီး Loading Bay A ကိုသွားပေးဖို့ပြောပါတယ်။
ပင်မ၀င်ပေါက်ကြီး နားမှာတော့ တကမ္ဘာလုံးက အားကစားChannel တွေက
ဂြိုလ်တုကြီးငယ် ပေါင်းစုံသုံးပြီး တိုက်ရိုက် လွင့်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီး ကမ္ဘာနဲ့ အလွန်ဝေးတဲ့ဂြိုလ် တခုခုပေါ်
ရောက်နေသလိုကိုခံစားရတယ်။ ကားပိတ်မှာ ကြောက်ပြီး ခပ်စောစော လာကြတဲ့ဘောလုံးဝါသနာအိုး အများ အပြားကိုလည်း
သူတို့အားပေးမဲ့ ဘောလုံးအသင်းသီချင်းတွေ အော်ဆိုနေတာတွေ့ရသလို၊ အဲဒါကို မျက်တောင်မခတ်ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေတဲ့
ရဲတွေ ကလည်း တဖက်မှာရှိပါတယ်။ အဲဒီ အားလုံးရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဆယ်ဘီးကား တစ်စီးစာ ကုန်ပစ္စည်း အသွင်း အထုတ်
လုပ်တဲ့ အပေါက်က နေ မောင်းဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ကားပတ်လမ်း ပတ်လည်တလျောက်ကိုတော့မီးရောင် ခပ်မှိန်မှိန်လေးပဲ
ထွန်းထားပါတယ်။လမ်းတလျောက်ဘေးတွေမှာတော့ ပစ္စည်း အတင် အချ လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာ တွေကို F,E,G စသည်ဖြင့်
တွေ့ရပြီး၊ ပန်းအလှဆင်နေသူတွေ၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေသူတွေ၊ အအေးပုလင်းစီနေသူတွေ ၊ပစ္စည်း အတင်အချလုပ်နေသူများ
ကိုတွေ့ ရပါတယ်။ သူတို့ကို ကြည့်ရတာ အရမ်း တက်ကြွနေတယ်လို့ကို ခံစားရတယ်။ ကားပတ်လမ်း ရဲ့ရှေ့ ၁၀ ကိုက်ခန့်
ကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ အလွန်ကြီးမား လှတဲ့ အားကစားရုံ ရဲ့ပွဲကြည့်စင်ကိုမြင်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ပေါင်မုန့်တွေချရမယ့်
နေရာ အမှတ် (အေ)ကိုရောက်ပါတယ်။ အမှတ်( အေ)ကတကယ်တော့၊ အားကစားရုံကြီးရဲ့ ပင်မ ချက်ပြုတ်ခန်း ကိုတိုက်ရိုက်
ပစ္စည်း တင်ချ လုပ်နိုင်တဲ့ နေရာပါ။အခြားပစ္စည်းတင်ချနေရာတွေထက်၅ဆလောက်ပိုကြီးပါတယ်။ဘေးနားမှာတော့ရုံးခန်း
တစ်ခန်းရှိပြီး ၊ကျွန်တော့်ကားမရပ်ခင်မှာပဲရုံးခန်းအထဲက နေလူတစ်ယောက်ထွက်လာပါတယ်။ Steveပါ။ကျွန်တော့ကိုဒီအလုပ်ကို
လက်ခံပြီး ၊ပေါင်မုန့်တွေ လာပို့တာကို အလွန်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ခါ၊ထပ်ခါပြောပါတယ်။ နောက်အခု ရောက်လာတာ
လုံးဝ နောက်မကျကြောင်း နှင့် ညနေ ဘောလုံးသမားတွေ စားဖို့ အချိန် လုံလုံလောက်လောက်ရ ကြောင်း ပြောပြောဆိုဆို
ပေါင်မုန့်တလုံး ကိုယူပြီး ဒါမင်းအတွက် လက်ဆောင်ဆိုပြီး ပေးပါတယ်။ လုံးဝ မထင်ထားတဲ့သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် ကျွန်တော်
ခဏလောက်ကြောင်သွားပါသေးတယ်။ နောက်မှ ၀မ်းသာအားရယူပြီး နုတ်ဆက် ပြန်လှည့်ထွက်ခဲ့ပါတယ်.။
နောက်တနေ့ မနက်(၁၀)လောက်နာရီမှာ တော့ရုံးက ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်ပြီး၊ Wembley
အားကစားရုံ စီမံခန့်ခွဲမှု ဌာနက က ကျွန်တော့်ကို ဘ၀င်မကျမှု တစ်ခု ရှိတဲ့အကြာင်း သတင်းပို့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။
စိတ်ထဲမှာ မနေ့က ငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ ပေါင်မုန့် အကြောင်းဖြစ်မယ် လို့တထစ်ချ တွေးလိုက် မိပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူဆက်
ပြောတာကမနေ့က ကားပတ်လမ်းထဲမှာ ကားကို မီးဖွင့် ပြီး မမောင်း ခဲ့လို့ပါတဲ့။ ကျွန်တော် စိတ်ထဲကတော့ ဒီလို
အေးလေ အမှောင်ထဲမှာ မြင်အောင်ကြည့်နိုင်တဲ့ ငါတို့ မြန်မာတွေရဲ့ မျက်လုံးတွေအကြောင်း မင်းတို့မှ မသိတာ ကိုးကွ ...လို့။